Futa खोज: मुक्त Futanari ब्राउजर अश्लील खेल
खेल सबै-नयाँ FUTA खोज
अरे त्यहाँ – स्वागत गर्न FUTA खोज! हामी खुसी छौं, यो घोषणा गर्न शीर्षक पछि4लामो वर्ष मा विकास र आशा छ कि तपाईं रूपमा धेरै मजा खेल रूपमा हामी यो गरे यो बनाउन! हाम्रो दर्शन देखि सुरु भएको थियो सुनिश्चित गर्न हाम्रो खेल को एक थियो, सबैभन्दा प्रेम – र कदर – सर्कलमा समर्पित वयस्क खेल. जबकि हाम्रो उद्योग अझै धेरै nascent, हामी गर्यौं देखेको विशाल संभावित अन्य शीर्षक भन्ने गरेका छन् अति राम्रो प्रकाशन गर्दा आफ्नो अश्लील खेल अनलाइन । आज, हामी चाहन्छु तपाईं आमन्त्रण गर्न साइन अप गर्न हाम्रो परियोजना, चार्ज को पूर्ण मुक्त छ, र खेल हाम्रो ब्रान्ड नयाँ रिलीज!, पहिलो drafted अगस्ट मा माथि को 2016, we ' ve gone from strength to strength सिद्ध गर्न हाम्रो खेल सुनिश्चित र यो लागि तयार गर्न सबैलाई आनन्द । यो छैन एक बीटा परीक्षण, यो छैन एक अल्फा आमन्त्रण: यो एक पूर्ण पलिश जारी कि तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं समाप्त गर्न सुरु देखि रूपमा थिए भने यो एक मुख्यधारा खेल. मात्र फरक जा रहेको छ कि यो पुरा वरिपरि केन्द्रित FUTA! ध्वनि जस्तै केहि तपाईं मा रुचि हुन सक्छ? त्यसपछि खाता सिर्जना अहिले र हामी तपाईं देख्नुहुनेछ मा अन्य पक्ष । यो समय बारेमा हो हामी देखाए एक व्यक्ति बस कसरी हाम्रो ठूलो खेल छ!
हाम्रो ग्राफिक्स दृष्टिकोण
सिर्जना गर्दा एक खेल थिम्ड वरिपरि futanari, यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर पक्का गर्न दृश्य प्रदर्शन प्रमुख बिक्रि बिन्दु छ । रूपमा सबै संग अश्लील खेल, तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ सफल हुन आधारित आफ्नो दृश्य सौंदर्य भन्दा अरू केहि. अन्तिम समय थियो जब तपाईं खेलेको एक सफल ASCII अश्लील खेल? तिनीहरूले अवस्थित छैन! त्यो किनभने दृश्य सामग्री राजा छ र FUTA खोज, हामी प्रतिबद्ध छु एक ठूलो बाक्लो टुक्रा को हाम्रो विकास गर्न समय रही तस्बिरहरू र renders सही छ । , प्रत्येक मोडेल संशोधित गरिएको छ धेरै पटक भनेर सुनिश्चित गर्न यो मिल्न हाम्रो दृष्टि र गर्न जारी हुनेछ राम्रो हेर्न रूपमा, हामी रिलीज नयाँ सामग्री अद्यावधिक आउँदै वर्ष भन्दा. जब तपाईं, यो खेल खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ जस्तै महसुस गर्न, यो एक गैर-अश्लील शीर्षक को मामला मा यसको दृश्य उपस्थिति, मात्र सेक्स हुन्छ, यो शानदार देखिन्छ! Futanari एउटा रोचक आला कठिन छ भन्ने सही बनाउन, तर एक पूर्ण-समय टीम विशेषता सबै भन्दा राम्रो केही कलाकार वरिपरि यस शाखा मा कलाकृति, हामी विश्वस्त छौं कि तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ साँच्चै आनन्द हाम्रो दृष्टिकोण र शैली छ । , हामी पनि एक कस्टम डिजाइनर गर्ने गरेको बस सुनिश्चित गर्न यहाँ ती लंड हेर्न सिद्ध – पागल, हामी थाहा छ!
Gameplay मा FUTA खोज
जबकि ग्राफिक्स थिए स्पष्ट हाम्रो ध्यान, हामी गर्न चाहन्थे छ, एक खेल संग राम्रो gameplay विशेषताहरु । That 's why we' ve भारी उधारो देखि अन्य सफल जापानी काम गर्दछ, सहित Pokemon र अन्तिम कल्पना । You ' ll संभावना महसुस को एक अर्थमा संग familiarity हाम्रो gameplay विशेषताहरु र उपकरण एक पटक माथि नौकरी देखि निकाल FUTA खोज: यो एक आधुनिक खेल लागि आधुनिक अश्लील उत्साहीहरुसँग जो पनि हुन के gamers. यो नियन्त्रण राम्रो आत्म-व्याख्यात्मक छ, तर तपाईं गर्न सक्छन् rebind सबै मेनु मा तपाईं यति इच्छा – विकल्प तपाईंको हो! तपाईं जान रूपमा वरिपरि FUTA खोज, you ' ll find lots of quests र NPCs अन्तरक्रिया गर्न., याद गर्नुहोस् कि आफ्नो निर्णय यो खेल मा एक गहन प्रभाव मा परिणाम हुनेछ र गरिदिएको हुनुहुन्छ के गर्दै सक्षम रूपमा तपाईं को माध्यम ले प्रगति को विभिन्न कार्यहरू छ । यो गर्न सिफारिश पुनरावृत्ति को एक जोडी पटक अन्वेषण गर्न विकल्प सबै तपाईं को मामला मा gameplay निर्देशन छ । हामी विश्वस्त छौं प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ यो खेल खेल यति धेरै कि तपाईं फिर्ता आउन फेरि समय र समय निपटने गर्न यो अन्य कोण देखि. You ' ll be लात मार आफैलाई लागि छुटेको यति तपाईं छैन भने यो दिन को एक जोडी replays – भरोसा हामीलाई एक मा!
NPCs अद्वितीय व्यक्तित्व
कहिल्यै नरमाइलो लाग्यो प्राप्त को नै पुरानो NPCs विद्यमान हरेक खेल मा भएको र धेरै सानो discernable तिनीहरूलाई बीच मतभेद? खैर त्यसपछि प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो व्यक्तित्व प्रणाली! यो एकदम जटिल र कठिन व्याख्या गर्न मा एक समय को छोटो अवधि, तर मूल कुराहरु छन् कि विभिन्न NPCs विभिन्न गजहरू प्रेम र घृणा, साथै केही अन्य बोनस मापन अद्वितीय प्रत्येक चरित्र, परिवर्तन हुनेछ भनेर मा निर्भर गर्दछ, यो विकल्प तपाईं बनाउन मा खेल. उदाहरणका लागि, केही NPCs छन् भारी तिर geared वर्ण हो जो शारीरिक बलियो र विश्वस्त छ, जबकि अरूलाई रुचि nerdy प्रकार । , केही बालिका मा मात्र चासो हो, पैसा र एक NPC कडाई विशेष ख्याल राख्नुहुन्छ बारेमा कसरी राम्रो तपाईं खेल मा विभिन्न साधन! तपाईं निर्णय गर्न प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ कसरी दृष्टिकोण हरेक अवस्था बाहिर सबैभन्दा प्राप्त गर्न को लागि आफ्नो समय संग NPCs र हामी अत्यधिक प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र अनुकूलन संग आफ्नो चरित्र आनन्द सम्बन्ध र यौन मुठभेडों 62+ NPCs you ' re currently able संग संलग्न शारीरिक. FUTA खोज योजना गर्न अर्को थप 15 मा हाम्रो अर्को विस्तार कारण मा वरिपरि3weeks – त्यहाँ भएको कहिल्यै एक राम्रो समय खेल सुरु!
पूर्ण यन्त्र अनुकूलता
कुनै कुरा तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ भने एक खेल्न futanari खेल मा आफ्नो मोबाइल, ट्याब्लेट वा पीसी, हामी सक्षम छौं एक समाधान प्रदान. हाम्रो टीम विकसित गरेको छ एक अत्यधिक अद्वितीय खेल छ कि मोबाइल र पीसी वेरिएंट – दुवै जो सिंक्रोनाईजमा सक्छ seamlessly with one another. को वाहेक संग हाम्रो बादल बचत सुविधा, तपाईं गर्न सक्षम हुनुहुनेछ हप बीच उपकरणहरू संग बिल्कुल कुनै मुद्दा छ । हामी पनि हंगामा केही सम्पत्ति र ग्राफिकल तत्व जब तपाईं माथि लोड FUTA खोज मा एक मिसिन कि छैन एकदम शक्तिशाली पर्याप्त आनन्द पूर्ण अनुभव छ । , हामी अनुमान कि वरिपरि 9% को खेलाडी सामना कुनै कमी मा आफ्नो खेल को एक परिणाम रूपमा यो, तर हामी विश्वास छ, यो एक ठूलो सानो सुविधा छ. कि त हरेक – कुनै कुरा कसरी पुराना वा नयाँ आफ्नो मिसिन छ – आनन्द उठाउन सक्छौं FUTA खोज ।
त्यसैले तपाईं के प्रतीक्षा गर्दै? सदस्यता चार्ज को पूर्ण मुक्त छ र एक मिनेट भित्र, तपाईं हुन सक्छ, खेल को धेरै नवीनतम र सबैभन्दा ठूलो futanari सेक्स खेल. तपाईं गर्न सक्छन् जित्न कहानी र विजयी बन्न? त्यहाँ केवल एउटा तरिका पत्ता लगाउन: मा आउन मा राखे र आफ्नो कौशल परीक्षण गर्न विरुद्ध एक धन trove को तातो dickgirls! तपाईं हेर्न भित्र ।